Architects uye B2B Tweeting | Martech Zone
Muvhuro, July 11, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Iwo mabhizinesi kune bhizinesi (B2B) vanhu havasi vanogara vari pamusoro peyekutsvagisa nhau, asi nguva imwe neimwe mune imwe nguva iwe unowana gem. Kunyangwe iyi yakatarwa Infographic kubva Pauley Creative anotarisa pane ongororo yeUK Architects, Ndinotenda izvo zvakawanikwa zvinogona kuvhura mamwe makambani eB2B kuti aone kuti svikiro rinogona kubatsira sei kusangano ravo. Zvinoenderana nemhedzisiro yeongororo, vazhinji vavaki vanoshandisa Twitter kuenderana nazvino indasitiri nhau uye network nevezera rako veindasitiri.
Nezve Pauley Creative:
Maererano neavo Website, Pauley Creative anonyanya kushambadzira edhijitari yeiyo indasitiri yekuvaka. Isu tine ruzivo mukuvaka kwakakwira kuita uye kuyerwa nzira dzekushambadzira kwedhijitari kune vedu vatengi izvo zvinogadzira brand kuziva uye kutyaira mabhizinesi anotungamira emakambani ane chekuita nekuvaka.